हत्केलाको यो रेखा हेरेर पत्ता लगाउनुहोस् कि तपाईको भाग्यमा के छ? के छैन! – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > हत्केलाको यो रेखा हेरेर पत्ता लगाउनुहोस् कि तपाईको भाग्यमा के छ? के छैन!
हत्केलाको यो रेखा हेरेर पत्ता लगाउनुहोस् कि तपाईको भाग्यमा के छ? के छैन!
admin August 11, 2020 जीवनशैली, धर्म सँस्कृति, रोचक 0
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार व्यक्तिले जन्मदै भाग्य लिएर आएको हुन्छ । उक्त भाग्य विभिन्न ग्रहहरुको योगमा आधारित रहेको हुन्छ । जन्म समय स्थानका आधारमा तयार हुने कुण्डली वा चिनाका आधारमा त्यसलाई वर्णन गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै ज्योतिष शास्त्रले हस्त रेखाका आधारमा पनि मानिसको भाग्य र भविष्य बताउन सकिने र रेखाहरुको आधारमा ति पूरा हुने दाबी गर्छ । आज हामी यहाँ हस्त रेखाका केही यस्तै विषयबारे जानकारी दिन गइरहेका छौं ।
ज्योतिष शास्त्रका को अनुसार हाम्रो हातमा यस्तो रेखा हुन्छ जसले सरकारी नोकरीको संकेत गर्ने गर्दछ । यी रेखालाई पढेर तपाई आफै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ कि तपाईलाई सरकारी नोकरी मिल्छ कि मिल्दैन ।
तीन पर्वत: हाम्रो हत्केलामा धेरै प्रकारका पर्वत हुन्छन् । त्यसमा गुरु पर्वत, शनि पर्वत र सूर्य पर्वत । जसले सरकारी नोकरीको निर्धारण गर्ने गर्दछ ।
गुरु पर्वत: गुरु पर्वतले दिमाग र बुद्धिको संकेत गर्दछ । यदि तपाईको हातमा गुरु पर्वत छ भने सरकारी नोकरीको सम्भावना भएको संकेत गर्छ ।
शनि पर्वत: शनि पर्वतु जीवनमा कर्म र भाग्यको निर्धारण गर्ने रेखा हो । शनि पर्वत ज्यादै उठेको छ वा भित्र धसिएको छैन र सामान्य छ भने यो पनि सरकारी नोकरीको संकेत हो ।
सूर्य पर्वत: यदि तपाई राजनीतिको क्षेत्रमा मन्त्री वा सचिव बन्न चाहानुहुन्छ भने एकपटक आफ्नो हत्केलाको सूर्य पर्वतको जाँच गर्नुहोस् । यदि यो रेखा सीधा वा टुटेको छ भने पनि कडा मेहनत गरेपछि यो पद मिल्न सक्नेछ ।
भाग्य रेखा: भाग्य रेखा, जीवन रेखाको नजिकै हुन्छ । सामान्यतया यो रेखा जीवनरेखालाई छोएर शुरु भएको हुन्छ । यदि भाग्य रेखा सीधा र लामो लहराजस्तो छ भने यो सरकारी नोकरीको संकेत हो ।
दा’हसंस्कारपछि को’रोना पुष्टि, म’लामी खोज्दै प्रहरी
भन्दै मन्त्रीले नै ‘कोरोना पत्नी जस्तै हो, नियन्त्रण गर्न सकिँदैन’ भन्दै भाषण गरेपछि …